Family Program: သြံဥထံဟဲအဆ႕ကတီႈဘဥ တႈမၚအသးသ့ဥတဖဥ. 28.1.2021 | Radio Veritas Asia
Family Program: သြံဥထံဟဲအဆ႕ကတီႈဘဥ တႈမၚအသးသ့ဥတဖဥ. 28.1.2021
အေျခခံက်ေသာ မ်ိုးဥေၾကြျခင္း လကၡဏာမ်ား (28.1.2021)
ပိဏမုဥလ႕အဆီဟံဥဆီဃီ၀ံၚတဂၚန႔ဥ ဒ္သိးကဒ႕ထီဥ ကအိဥထီဥအဖိအဂီႈ တႈကမၚအသးဒီး အိဥဖ်ါထီဥဒီးအီၚ သ႕ခါန႔ဥလီၚ’ ၁’ အနီႈခိ တႈကိႈကဟဲဒိဥထီဥ၀ဲ ၂’ ပိဏမုဥအက့ႈအဂီၚ အိဥထီဥဒီး တႈထံလ႕အဘူးတဏတဖဥ ၃’ဒ႕လီႈအတႈအိဥတႈဆိးအလီႈ ကဆီတလဲအသးန႔ဥလီၚ’ တႈသ႕ခါအံၚ မ့ႈအိဥဖ်ါထီဥလံန႔ဥ အ၀ဲကအိဥထီဥအဖိန႔ဥ မ့ႈ၀ဲတႈလီၚတံႈလီၚဆဲး အတႈပနီဥန႔ဥလီၚ’ ပိဏမုဥတနီၚနီၚအါဒဥတႈတက့ႈလ႕ ဟံ၀ဲအရ့လ႕အခီဥထံးခံခါဧိၚန႔ဥလီၚ’ အဲဥဒိးဟ့ဥကူဏဟ့ဥဖးဘဥ ဒီပုႈ၀ဲႈပိဏမုဥလ႕ အလုအလႈတဟဲ မႈမႈသ့ဥတဖဥလ႕ ကဃုသ့ဥညါဘဥ၀ဲ နီႈဂံႈ (၃) တထံဥစ့ႈကီးန႔ဥလီၚ’
တႈဂ့ႈအ၀ဲအံၚ ပကဘဥလူၚဃုသ့ဥညါ မၚကြႈတနံၚတစဲးဖိန႔ဥလီၚ’ပိဏမုဥလ႕ဆီဟံဥဆီဃီ၀ံၚ သ့ဥတဖဥ မ့ႈအဲဥဒိးသ့ဥညါသးတႈဂ့ႈ လီၚဆီတမံၚမံၚန႔ဥ ဖဲမံဂဲၚဆ႕ထီဥဂီၚဂီၚအခါ ကဘဥထိဥကြႈ၀ဲ အတႈကိႈန႔ဥလီၚ’ တႈမၚကြႈအ၀ဲအံၚ တမ့ႈ၀ဲတႈကီတႈခဲ တႈဃ႕တႈစံဏတခါဘဥ’ ပမ့ႈမၚကြႈဒ္န႔ဥမဥဒီး ပကြဲးနီဥကြဲးဃါ၀ဲ မုႈနံၚမုႈသီလ႕ ပလုပလႈကဟဲ၀ဲ သ့ညီညီန႔ဥလီၚ’ ပကသ့ဥညါလီၚတံႈစ့ႈကီး အမုႈနံၚန႔ဥလီၚ’
ပိဏမုဥသ့ဥတဖဥ အလုအလႈအကိ်ၚအက်ဲန႔ဥ ဆီတလဲသးကိးလါဒဲးအဃိန႔ဥလီၚ’ တႈမၚကြႈတခါအံၚ မ့ႈ၀ဲတႈလီၚတံႈလီၚဆဲးတခါန႔ဥလီၚ’ လ႕ညါပွၚကိးလ႕ (Phythm Method) န႔ဥကဲထီဥ တႈတပ်ံဏတပ်ဏသ့၀ဲလီၚ. (Phythm Method) န႔ဥတႈလီၚတံႈတအိဥ၀ဲ ကိးဘ်ီဒဲးဘဥအဃိန႔ဥလီၚ.